Pledge - CLEAN AIR MYANMAR
ကျွန်န်ုပ်တို့သည် မြန်မာပြည်သူတစ်ယောက်အနေဖြင့် မိမိ၏ သွားရေးလာရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် အမူအကျင့်များကြောင့် လေထုညစ်ညမ်းခြင်းကို ဖြစ်စေပြီး မိမိတို့နေထိုင်ရာကမ္ဘာမြေကြီးနှင့် သက်ရှိအားလုံးအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ကြောင်း သိရှိလိုက်ရပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ပြုလုပ်ခဲ့သော ထိုအမူအကျင့်များအတွက် အားလုံးအသက်ရှင်စေသည့်လေအား ပိုမိုသန့်စင်လာရန် တာ၀န်ကျေအောင် ဆောင်ရွက်ပါမည်။
- နီးသည့်နေရာများကို သွားလိုလျှင် လမ်းလျှောက်၍ သွားပါမည်။
- လမ်းလျှောက်သွားရန် ဝေးသောခရီးများကို စက်ဘီး (သို့မဟုတ်) ဆိုက်ကားစီး၍ သွားပါမည်။
- ခရီးဝေးလျှင် အများပြည်သူသုံး ဘတ်(စ်)ကား၊ ရထား၊ Taxi စသည့်တို့ကို စီး၍ သွားပါမည်။
ကျွန်န်ုပ်တို့နှင့် ကျွန်န်ုပ်တို့ ချစ်ခင်ရသောသူများ ကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ ဘဝရရှိစေနိုင်ရန် လေထုညစ်ညမ်းခြင်းကို လျော့နည်းအောင် ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆောင်ရွက်ပါမည်
Asacitizen of Myanmar, I am fully aware that my transportation habits have contributed to air pollution that causes serious harm to the planet and its people. To make up for my wrongdoings, I will take responsibility and do my part to take care of the very air that keeps us alive.
- To walk when I need to get to places near by,
- To bike and hire trishaw when the destination is out of walking distance,
- And to use public transportation services (buses, trains, and shared taxi) to travel to long distances
Whenever I can, as much as I can, to help improve the air quality for myself and my loved ones to livealong, healthy and happy life.
အမည် / NAME *
အသက် / AGE *
လေထုညစ်ညမ်းမှုလျှော့ချဖို့ သင်ဘာလုပ်မလဲ / What would you do to help reduce air pollution? *
ဘတ်(စ်) ကားစီးမည် / Ride the bus ရထားစီးမည် / Take the train လမ်းလျှောက်မည် / Walk when it's near Taxi ကိုသူငယ်ချင်းများနှင့်မျှစီးမည် / Takeataxi with friends ကိုယ်ပိုင်ကားစီးခြင်း လျှော့ချမည် / Avoid using personal car if possible ဆိုက်ကားစီးမည် / Takeatrishaw စက်ဘီးစီးမည် / Rideabike
မှတ်ချက်ပေးနိုင်ပါသည် / Leaveacomment *
ကတိပြုပါသည် / Pledge